I-Wordpress: I-plugin Yokuhlanganisa ye-SMS | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septhemba 6, 2008 NgeSonto, uDisemba 14, i-2014 Douglas Karr
Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi bengithule kuleli sonto eledlule. Akuveli ekuswelekeni komsebenzi, ngibe ne-a iviki elimatasa!
Omunye wamaphrojekthi ebengisebenza kuwo kuleli sonto kube yi-WordPress Plugin evumela ukuthi iqonde SMS ukuhlanganiswa ne Iselula exhumanisayo. I-plugin inamandla impela, inokubambisana kokulawula kanye nesixhumi esibonakalayo sombhali. Isixhumi esibonakalayo somlawuli sikuvumela ukuphatha izici zokuhlanganiswa. I-interface yombhali ikuvumela ukuthi ungeze ababhalisile futhi uthumele imiyalezo kubabhalisi bakho beklabhu yombhalo.
Isixhumi esibonakalayo se-Administrative Mobile:
Ukufinyelela kweleveli yomlawuli kuphela
Ukufakazela ubuqiniso be-API
Bhalisela amazwana (womnikazi webhulogi). Ihlunga ngokuzenzakalela U-Akismet okhethwe njengogaxekile!
Izexwayiso zeposi leBlog (ukwazisa ababhalisile bakho lapho okuthunyelwe kushicilelwe, kuhambisana neWordPress 2.6.1+)
Ifomu lokufaka ngesandla isikhokhelo.
Thola ukubalwa kwababhalisile.
Isixhumi Sokuxhumana Sombhali Oxhumanisayo:
Izinga lomlobi noma ukufinyelela okuphezulu
Thumela umlayezo wombhalo wokusakaza kubabhalisile bakho
Fushanisa i-URL (usebenzisa is.gd) ofuna ukuyifaka kumlayezo wakho wombhalo
Ngesandla engeza obhalisile.
Iselula exhumanisayo ine-robust impela API futhi bengisebenza no-Adam lapho ukuze ngilungise kahle i-plugin futhi ngithuthukise ukuhlanganiswa okukhulu. WordPress ikhule kancane kulo nyaka odlule futhi isetshenziselwa ukusetshenziswa okuningi, kufaka phakathi i-ecommerce, izaziso zokuxhaswa kwamakhasimende, ukuphathwa kwemicimbi, njll. Ukwengeza ikhono lokubhalisa nge-SMS kuyinto enhle kakhulu.
Sizoyivivinya kubhulogi lami! Uma unentshisekelo ku-plugin nensizakalo, ungaxhumana no-Adam ngewebhusayithi yabo. Qiniseka ukuthi usho okuthunyelwe yimi kubhulogi, sisebenzela ukuletha isephulelo sabafundi bami. Sithanda futhi ukufaka ama-blogger wokuhlola ambalwa (insiza ikhawulelwe e-US okwamanje) ezonikeza insizakalo ukujima.
Isevisi ihambisana ngokugcwele nazo zonke izinkampani zenethiwekhi, edinga ukukhetha okungabili kokukhetha ukuphuma nokuphuma. Ungakhetha ukungena ngokuthumela imiyalezo IMartechLOG kuya 71813. Ungakhetha ukuphuma ngokuthumela imiyalezo STOP MartechLOG kuya 71813.
QAPHELA: Asinacala ngamacala umphathi wakho angakukhokhisela wona ngemiyalezo noma izindleko zedatha ezihlobene nayo! Le yi-beta ngokuphelele manje (bekufanele ngabe ubhalisile lapho bekuxwayiswa ngayo yonke imibono ye-SPAM!).
Tags: i-wordpress smsukuhlanganiswa kwe-sms ye-wordpressi-plugin ye-wordpress sms
Saqasha Ummeli Namuhla
Lokhu kubukeka kumangalisa ngebhizinisi elincane lendawo. Ngibheke phambili ukuzwa ukuthi yamukelwa kanjani esitolo sekhofi. Ingabe ekuqaleni ngangicabanga ukuthi kungakuhle ukuba nomlawuli aphathe ukuphawula ngenkathi kuselula kepha imibono yakho ikudlulisela kude kakhulu.
I-Oct 3, i-2008 ku-9: i-44 PM
Sawubona, lokhu kuzwakala kuthakazelisa ngempela! Ingabe kukhona isixhumanisi sokulanda noma yikuphi?
I-Oct 4, i-2008 ku-3: i-45 PM
I-plugin idinga i-akhawunti nge Iselula exhumanisayo. Ungaxhumana nabo uma ungathanda ukwenza ukuhlolwa nathi, sengeze inketho ethi 'okuthunyelwe ngakunye' ku-plugin kamuva nje! Inguqulo 3.2 manje iphumile.
May 3, 2016 ku-9: 56 AM
Kungenzeka yini ukuguqula inqubo ye-WP yokubhalisa / yokubuyisela iphasiwedi kusuka ku-imeyili / iphasiwedi iye ocingweni / kwi-OTP-password (ethunyelwe nge-sms)?
May 3, 2016 ku-10: 23 AM
Nginesiqiniseko sokuthi kunezinsizakalo ezinikeza lokho. Ngiyazi ukuthi kune-plugin yokuqinisekisa evela kuGoogle evumela uhlelo lokusebenza nekhodi.